Sithusile isinqumo sikaMusonda - Isolezwe | IOL.co.za
News Business Sport Motoring Tonight Lifestyle Travel SciTech Blogs Newspapers Classifieds Property Jobs Isolezwe Home Izindaba Ezokungcebeleka Ezemidlalo Intandokazi Ezemisakazo Ezezimoto Sithusile isinqumo sikaMusonda
June 20 2012 at 10:46am Comment on this story
UKAPUTENI weLamontville Golden Arrows uJoseph Musonda ubukeka ezogugela kuleli qembu laseThekwini ngemuva kokusayina inkontileka yeminyaka emithathu nalo
MTHOKOZISI MNCUSENI UYEKE ithuba lokwenza itshe lemali efunwa yiqembu lase-United Arab Emirates (UAE) waqoma ukuvuselela inkontileka yakhe ngeminyaka emithathu kuLamontville Golden Arrows ukaputeni waleli qembu odabuka kwelaseZambia uJoseph Musonda. UMusonda (35) odle isicoco se-Africa Cup of Nations (Afcon) neZambia kulo nyaka uthuse abaningi esayina inkontileka ende ne-Arrows ekubeni bekunemahlebezi okuthi angase ashiye kwazise ijezi ubelizwa ngendaba ngaphansi kobuholi bukaMuhsin Ertugral. Lo mqeqeshi waseTurkey ubesebenzisa uThamsanqa Mkhize noma uSiyanda Zwane kule ndawo edlalwa yilo kaputeni. Ngaphandle kwalokhu lo mdlali okwazi ukuzisebenzisa zombili izinyawo ubehlale enamakhadi obekwenza u-Ertugral ahluleke wuku-hlelela phezu kwakhe. Okunye obekumenza angadlali njalo uMusonda wukuthi ubebuye ahlushwe wukulimala njengoba kwenzekile nasemdlalweni wamanqamu e-Afcon ethinteka esiwombeni sokuqala bebhekene ne-Ivory Coast. “Akukho okuyisipesheli okungiyekise ithuba lokuyoyikha ngamafosholo imali ngaphandle kokuthi ngeneme ngendlela engiphethwe ngayo ku-Arrows. Nokuba kude kakhuluu nomndeni wami kube ngenye yezimbangela njengoba wonke ubheke mina eZambia,” kusho yena. Ebuzwa ngokuthi kuhamba kanjani ngokulimala kwakhe njengoba isizini ize yavala engakalulami ekulimaleni akuthole edlalela iZambia ku-Afcon uthe usekulungele ukulwela ijezi. “Nakuba bengisebhentshini emidlalweni yethu yokuhlungela ukungena ku-Afcon ngesizini ezayo kodwa ngizizwa sengiwumqemane manje. Ngiziqeqesha ngokugcwele njengabanye abadlali okwenza ngizibone ukuthi sengikulungele ukubuyela enkundleni.” UMusonda ubekhuluma naleli phephandaba ematasa namalungiselelo okubuyela ejimini kwazise i-Arrows ibuyile emaholidini kusukela izolo. Kusenjalo leli qembu alizange liwusebenzise uphawini wokukhulisa inkontileka ka-Andre Petim ongunozinti ebelimboleke ku-Ajax Cape Town. USiyabonga Nkosi usayine kuKaizer Chiefs ekubeni uSiphelele Mthembu uveze ukuthi usebumnyameni ngekusasa lakhe ku-Arrows. Omunye umdlali okubikwa ukuthi angase ayishiye i-Arrows nguRobyn Johannes okhonjwa ku-Ajax kanti uClifford Ngobeni abebebolekwe naye ku-Orlando Pirates akazimisele ngokubuyela emuva kodwa ubengekho ejimini izolo ngokunjalo noKatlego Mashego beno-Elrio van Heerden. Kubonakale uStanton Lewis osayine kuyona esuka komakhelwane AmaZulu. Comment Guidelines
IOL / Isolezwe / Sithusile isinqumo sikaMusonda We like to make your life easier